के Cryptocurrency ग्राम र टेलिग्राम IČO बारेमा हामीलाई थाहा छ - Blockchain समाचार
जनवरी 15, 2018 व्यवस्थापक
के Cryptocurrency ग्राम र टेलिग्राम IČO बारेमा हामीलाई थाहा छ
तार संस्थापक पावेल Durov एक blockchain सुरु गर्न जाँदै छ, तार खुला नेटवर्क (TON), र cryptocurrency ग्राम, यसरी, तार केवल एक दूत हुनेछ, तर पनि भुक्तानी प्रणाली भिषा र मास्टरकार्ड संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ. Durov आधिकारिक यो जानकारी पुष्टि भएको छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सबैभन्दा विशेषज्ञहरु विश्वास यो सत्य हो, र लगानीकर्ताले परियोजना पैसा लगानी गर्न तयार छन्. त्यसैले, गरेको हामी परियोजना बारे थाहा के हेर्न दिनुहोस्, यो के सेवाहरू शामिल हुनेछ, र यो विद्यमान सामाजिक सञ्जाल वा प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनेछ कि गर्न.
के हामी TON र ग्राम बारेमा थाहा
टेलिग्राम टोली लागि प्राथमिक कार्य सबैलाई द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सहज इन्टरफेस संग एक blockchain मंच सिर्जना गर्न छ. Bitcoin र Ethereum विपरीत, TON प्रति सेकेन्ड एक लाख लेनदेनको एक उच्च throughput हुनेछ. TON प्रयोगकर्ताका एक कारोबार सञ्चालन गर्न सप्ताह प्रतीक्षा वा तुरुन्तै रकम स्थानान्तरण गर्न उच्च आयोग शुल्क तिर्न छैन. TON भुक्तानी भिषा वा मास्टर कार्ड ती रूपमा चाँडै पारित हुनेछ. यसबाहेक, मञ्चमा प्रमाण-को-शूलीमा सहमति अल्गोरिदम काम गर्नेछ, जो भुक्तानी सुरक्षित गर्नेछ.
TON निर्माताहरू टेलिग्राम मा हल्का वालेट निर्माण हुनेछ. यो सम्पूर्ण blockchain डाउनलोड बिना मोबाइल उपकरणहरूमा काम गर्नेछ, र केवल प्रयोगकर्ताहरूले निजी कुञ्जीहरू भण्डारण. अन्य कुराहरु, प्रयोगकर्ता आवेदन सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेछ (TON सेवा) cryptocurrency ग्राम संग, पहिचान र IP ठेगाना लुकाउन, साइटहरु को रोकावट बाइपास (TON प्रोक्सी), डाटा स्टोर (TON भण्डारण), र डोमेन ठेगाना दर्ता (TON WWW).
को TON प्रस्तुति लाखौं मानिसहरू सयौं ग्राम विश्वव्यापी प्रयोग गर्नेछ भनेर भन्छन्. यी योजना व्यावहारिक जस्तो, अब दूत को दर्शक छ कि दिइएको 180 लाख मान्छे. भविष्यमा, बेंचमार्क एक अर्ब मानिसहरू हुनेछन्. अन्ततः, तार नयाँ अर्थव्यवस्था सिर्जना गर्न आशा, जहाँ मान्छे ग्राम संग सामान र सेवाहरू लागि भुक्तानी गर्नेछ.
भविष्यमा टेलिग्राम को परियोजना पहिले टेलिग्राम जस्तै केवल दूत थियो प्रसिद्ध चिनियाँ आवेदन WeChat धेरै समान छ. तर अब यो एक सामाजिक सञ्जाल को कार्य जोडती, भुक्तानी मंच, म्याचमेकिङ् सेवाको साइट, एक प्रदायक (तपाईं अनुप्रयोगमा ट्याक्सी वा खानाको आदेश गर्न सक्छ), एक व्यापारिक मंच, एक दोभासे, र पनि भुक्तानी उपयोगिता मा व्यक्तिगत मन्त्री.
WeChat प्रयोगकर्ताहरूको संख्या एक अर्ब नजिक छ (यो Durov गरेको बेन्चमार्क को सही नम्बर हो). हरेक सार्वजनिक आंकडा, इन्टरनेट परियोजना, वा चीन मा कम्पनी एप्लिकेसनमा एउटा सरकारी पृष्ठ छ. यसरी, विज्ञापन को धेरै धेरै छ.
सबैभन्दा चिनियाँ बिना WeChat आफ्नो जीवन कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं. यो चिनियाँ मान्छे पनि मदत संग सानो पसलहरूमा मा भुक्तानी गर्न सक्ने यति लोकप्रिय छ WeChat. यी पसलहरूमा धेरै क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी प्रदान नगर्नुहोस्, तर WeChat मानिसहरूलाई कुनै समस्या आफ्नो खरिदका लागि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ.
पावेल Durov विपरीत, WeChat को निर्माताहरू लोकप्रिय रूपमा यस्तो कुनै लाभ थियो; तिनीहरूले एउटा सक्रिय र पनि आक्रामक तरिकाले आफ्नो भुक्तानी प्रणाली बढुवा किन हो. यसबाहेक, तिनीहरूले विभिन्न उपकरणहरू WeChat भुक्तानी स्वीकार भनेर आधिकारिक खाता खुला अनलाइन स्टोर मद्दत गर्न विकास थिए. यसरी, WeChat तत्काल कुनै पनि व्यापार बन्द, कुनै आवश्यक स्रोतहरू भएकाहरूले पनि, मोबाइल पसल मा.
टेलिग्राम टोली आफ्नो फाइदा एकजुट गर्न व्यवस्थित भने, यसको बीउ राजधानी जस्ता, लोकप्रियता, पदोन्नति कम्पनी, र समाधान च्यानल र विक्रेताहरु को लेखक को लागि प्रदान, यो रूस मा सबै प्रसिद्ध कम्पनीहरु संग प्रतिस्पर्धा हुनेछ, YouTube बाट Yandex.Market गर्न लिएर.
तार खुला नेटवर्क (TON) – पीडीएफ
My Cryptocurrency Portfolio [टी ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 15 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 16 जनवरी 2018